Gazety maneran-tany - laharana 12 - ny volana martsa
Home » About us » Newsletters » Gazety maneran-tany - laharana 12
Gazety maneran-tany - laharana 12
21 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Amin'ity bulletin ity, ho hitantsika fa tonga any Amerika ny Team Team an'ny 2 World March for Peace and Nonviolence. Tany Mexico, nanohy ny asany izy ireo.
Ho hitantsika ihany koa fa ny asa dia atao amin'ny faritra rehetra amin'ny planeta.
Ary izany, amin'ny alàlan'ny ranomasina, mitohy ny diabe eo anelanelan'ny fahasahiranana sy fifaliana lehibe. Ho hitantsika ny andro vitsivitsy ao amin'ny lisitry ny karatrao.
Namorona ny fandaharan'asa tany Mexico ny World March: Mexico City, San Cristobal sy Guadalajara eo anelanelan'ny 8 sy ny 15 Novambra.
Nifarana ny fijanonana tao Mexico ary mbola hitohy amin'ny firenena manaraka. Nankany amin'ny sisin-tany, nankany Ayutla, ireo Meksika, hiampitana ny Reniranon'i Suchiate.
Ny martsa manerantany 2 any Goatemala: Ayutla, SF Retalhuleu ary Quetzaltenango. Fandaharam-potoana hentitra amin'ny departemanta samihafa any Andrefana.
Alao ny an-traboina amin'ilay antsoina hoe Ady amin'ny lalao baolina kitra anelanelan'i Honduras sy El Salvador
Ny volana martsa dia namorona ny fandaharan'asa tany Mexico
Ny volan'ny fandozana ny martsa manerantany
Ento ho an'ireo niharam-boina tamin'ny "Ady Soccer"
Raha ny toeran'ny ekipa World March Base dia tany Afrika, koa rehefa nanao fitsidihana any Amerika izy ireo ary nanohy ny hetsika tany Meksika, Guatemala, El Salvador, Honduras ..., any amin'ny firenen-kafa dia nisy hetsika hafa tao amin'ilay diabe ihany koa.
Noho ny toe-java-misy nitranga tao Bolivia, dia nisy antso avy tamin'ny World March ho an'ny Firenena Mikambana hanelanelana amin'ny onjan'ny herisetra fanavakavaham-bolon-koditra taorian'ny fandrosoana.
Any Ekoatera, vonona Cavalcade for Peace ary vonona ny Montubia de Guayas, Manabí sy Los Ríos Integration Komity manomana ity hetsika goavana ity. Ny Cedhu dia nanatevin-daharana ny volana martsa ary nikarakara hetsika ho an'ny volana Desambra.
Antso ho an'ny fitsabahan'ny Firenena Mikambana any Bolivia
Mandeha soavaly ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana
Aorian'ny fanombohan'ny volana martsa, Brezila
Ao Peroa, afaka mahita hetsika toy ny any Cerro Azul isika, miaraka amin'ny fankatoavana an'i Mundo sin Guerras, fivahiniana Namballe mankany Cerro el Huabo ary Simban'ny tsy herisetra any Lima.
Hatramin'ny nandalovan'ny volana martsa ka hatrany amin'ny Nosy Canary, anisan'izany ny Lanzarote dia nanohy sy nanohy nanao hetsika isan-karazany izy ireo, eto izahay mampiseho eto.
Any Palmira, Colombia, mifanaraka amin'ny 2 World March, misy hetsika fanaovan-javatra sy fitsangatsanganana ho an'ny fandriampahalemana no tanterahina.
Aorian'ny fanombohan'ny 2 World March dia manasongadina hetsika vitsivitsy any El Salvador isika.
Aorian'ny fanombohan'ny volana martsa, Peroa
Aorian'ny fanombohan'ny volana marsa, Lanzarote
Hetsika ho an'ny fandriampahalemana ao Palmira, Colombia
Aorian'ny fanombohan'ny volana marsa, El Salvador
Ny Ben'ny tanànan'ny Recoleta, Chili, dia manohana ny TPAN. Ity no ohatra amin'ny fandraisana anjaran'ny La Marcha ho an'ireo tanàna sy tanàna maneho ny fanohanany ny fifanarahana miady amin'ny fitaovam-piadiana niokleary.
Ny sambo Peace, hoy i Piraeus, Gresy. Nohararaotina, tamin'iny efitranony iray iny ny 2 World March izay natolotry ny fanampiana ho an'ny daholobe, ny fikambanana ary ny manampahefana.
Namboarina tao amin'ny 2ª World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana, ny Forum 15º for Peace and Nonviolence dia natao tao amin'ny Coloney Elioterapica of Germignaga.
Ny ben'ny tanànan'i Recoleta dia nanao sonia ny TPAN
Diabe maneran-tany any Piraeus, Gresy
Forum Fandriampahalemana sy Nonviolence, Germignaga
Ny fizarana ny volana martsa ho an'ny ranomasina, ny hetsika Mediteraneana Mar de Paz, dia mitohy miaraka amin'ny fitetezana azy, hitantsika ny zava-drehetra ao amin'ny paikadiny.
Ary, avy amin'ny tany, manazava ihany koa ny anjara biriky mankany amin'izany fanamoriana izany.
Logbook, alina 9 ary 10 hatramin'ny Novambra 15:
Amin'ny alin'ny Novambra 9, raha jerena ny vinavinan'ny toetrandro dia tapaka izany, mifanaraka amin'ny alimanaka mandritra ny ambaratonga sisa, fa tsy mandeha any Tonizia.
Bikao, avy any an-tany:
Tiziana Volta Cormio, dia mitantara amin'ity takelaka ity, voasoratra avy amin'ny tany, ny fomba nahaterahan'ny lalan'ny martsa voalohany tamin'ny World March.
Bikao, avy any an-tany
Eto amin'ny Andrés Bello University any San Miguel